Sleepwalking noma somnambulism - into lalivamile kwezokwelapha. Isikhathi esining impela kulesi simo kwenzeka ezinganeni iminyaka eyisithupha nambili. babonakala bethambekele kakhulu ngalokhu kugula abafana. Ngokuvamile, nge isikhathi ingane iya sleepwalking uqobo. Ziyini izimbangela eziyinhloko zalokhu of somnambulism - nokukhathazeka, ukukhohlwa izinsizi, ukucindezeleka.
Sleepwalking ezinganeni. Kwenzakalani?
Naphezu kweqiniso lokuthi isimiso sezinzwa futhi ingqondo umntwana elele, umzimba wakhe Ungahambisa. Esikhathini "ithule" isimo ingane abayinqaba bakwazi ukuphuma embhedeni sizulazule efulethini. Ngesikhathi esifanayo ebe evulé amehlo akhe, kodwa, njengoba ubuchopho ulele, ingane, angase angasabeli noma aphendule imibuzo abazali '. Njengoba "nokuvuka" Ngokuvamile, isikhathi imizuzu eyishumi nanhlanu. Nokho, ezinye izingane, kulokhu kungaba kakhulu anda.
Sleepwalking ezinganeni. izimpawu
Ukuba khona ka somnambulism e ingane kungase kubonise eziningi izimpawu. Okokuqala, uma ingane ehlezi phezu kombhede noma uhamba ngesikhathi sokulala. Okwesibili, uma dozing ngamehlo akhe evulekile. Olunye uphawu - ukukhuluma ngesikhathi sokulala, imisindo, amabinzana, njll
Sleepwalking ezinganeni. izizathu
Sleepwalking kuboniswa ngokumelene isizinda ukucindezeleka okunzima ngokomzwelo, ukukhathazeka, ukukhathala, ukuqwasha, ngezinkathi zezinguquko nokuvuthwa asebenzayo. Njalo ingane kuphakama mkhuba ngenxa yezizathu ezihlukahlukene. Indima ebalulekile inikezwe kanye nezici ezithile sitholwa njengefa. Ochwepheshe bakholelwa ukuthi imbangela evame kakhulu yinqubo engalingani nokuvuthwa we umzimba abasha. Eminye iminyango bayatfutfuka isheshe kunabanye, okubangela Ukungadli amasistimu ahlukahlukene yokwakheka. Ngokuvamile sleepwalking ingane kwenzeka phakathi nokuthomba. Kuyinto kule nkathi ngokushesha ukuthuthukisa isimiso sezinzwa. Esinye isizathu esibalulekile - kungcono ukucindezeleka. Kungabangela ezahlukahlukene: ubuthongo udlubulunda, ukuziphatha ezinomsindo yabanye, kubangela njalo ovukayo ingane, izinkinga esikoleni, ukulwa emgwaqweni, movie scary, njll
Into yokuqala ukucacisa kuyinto sleepwalking ingane ngenxa yokucindezeleka noma kungaba into Neurotic. Phawula umusho, amagama ukuthi ingane yakho ukhuluma ephusheni, futhi enza konke okusemandleni akhe ukuze aqede zezici okuphazamisayo kwalimala psyche yakhe. Uma ngesikhathi "uhambo" umntwana bounces, bazokwenza lokho nakuBafana izandla zakhe, kususwe izindebe zakhe, kwenza ukunyakaza abukhali, kufanele sibonise khona neuropsychiatrist. Njengoba lezi zimpawu kungase kubonise izifo ezingathi sína kwababhemayo. Kunoma yikuphi, uma ingane yakho La Sonnambula, ukuzama ukuqinisekisa ukuthi ingane yabo yokulala enempilo. Ojahidada nje badinga 'nesikhathi sokuthula' nsuku zonke. Vikela ingane yakho kusuka kunoma iyiphi ukucindezeleka, njengoba psyche kwezingane kuyinto eziguquguqukayo. Ngaphambi sokulala, kukhawulwe ingane ubuka i-TV, iselula imidlalo asebenzayo. Ukuze ebusuku "uhambo" awugcini nhlekelele, kahle ukuvala iminyango namafasitela, ukuhlanza izinto Breakable noma abukhali. Abalokothi bangavuki ingane bezihambela. Kancane kancane futhi ngobumnene ukuhambisa phezu embhedeni futhi embhedeni. Ngemva kokudla kwakusihlwa, ungayeki ingane yakho itiye eqinile noma ikhofi. Lungiselela ingane conifer-usawoti opholile okugeza, uvale amakhethini izibani emgwaqweni ungaphazamisi ubuthongo bese uvala isibani egumbini. Ngokuvamile, dala microclimate evumayo ngizole.